NBUDATA MKPỌCHI MKPỌCHI ANVIDE NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
Ogwe Nchechi Anvide 2.40
Na draịvụ ike, nke ọtụtụ ndị na-eji, nwere ike ịchekwa ọtụtụ ozi. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ ndị ọzọ ekwesịghị ịhụ ya, ma mgbe ị na-ezoo nchekwa site na iji ngwaọrụ ndị a, ị ka nwere "nkwụsị" gị. Iji zoo nchekwa dị iche iche, nchekwa Anvide Lock zuru okè.
Ogwechi mkpọchi Anvide bụ usoro maka ịchekwa nchekwa na faịlụ site na ndị ọrụ kọmputa ọzọ. N'ihi otu algorithm pụrụ iche, ọ na-ezobe data na ebe a kapịrị ọnụ, si otú ahụ na-eme ka nchebe ha.
Mgbe ị na-agbakwunye ndekọ ọ bụla na ndepụta ahụ, ọ nwere ike zonahụ ya. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ n'usoro ihe omume ahụ, mana n'otu oge ahụ ka a ga-ahụ ya. Iji zoo ya, ọ dị mkpa iji gbochie ịnweta ya site na ọrụ pụrụ iche.
Okwuntughe iji meghee
Isetịpụ paswọọdụ ga-ekwe ka ndị na-enweghị ikike kwụsị ya. Ọzọkwa, ị nwere ike itinye paswọọdụ dị iche iche na akwụkwọ ndekọ dị iche iche.
Na mgbakwunye na koodu maka nchekwa nke ọ bụla, enwere ike itinye ya na usoro ahụ dum. Mgbe ahụ, mgbe ị mepee Anvide Lock Folder, ị ga-achọ ịbanye paswọọdụ i setịpụrụ iji nọgide na-arụ ọrụ na ya.
Ngwurugwu obere ịsọ asọ bụ nke a na-ahụ maka mmemme mmemme. Ị nwere ike gbanyụọ visibiliti nke ihe ụfọdụ, gbanwee agba na isiokwu nke ọdịdị ahụ, mee ka mmeme na ihe ndị ọzọ.
Nzuko zuru ezu;
Nwekọrịta nke na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ mmasị;
E nwere otu ederede a na-ebigharị.
Enweghi emelite ya ogologo oge.
Usoro ihe a bụ ihe atụ magburu onwe ya nke eziokwu ahụ bụ na software nwere ike ibudata ma dịkwa mfe. O nwere ihe niile ị chọrọ, ọ mara mma ma nwee interface doro anya, ma kachasị mkpa, ọ na-arụ ọrụ ya niile nke ọma.
Nbudata Nchechi mkpọchi Anvide maka n'efu
Mkpuchi nchekwa WinMend Echekwala nchekwa Onye na-emepụta ihe maara ihe Aka nchekwa onwe
Ogwechi mkpọchi Anvide bụ software n'efu maka ịchekwa data nke onwe gị, site na-ezo ya na nlele.
Onye Mmepụta: Anvide Labs